Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ် စာသင်ကျောင်များ ပြုပြင်ရန် တေးဂီတပွဲကျင်းပမည်
ရခိုင်ပြည်နယ် စာသင်ကျောင်များ ပြုပြင်ရန် တေးဂီတပွဲကျင်းပမည်
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၃
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အကြမ်းဖက်ဖျက်စီးမှုများကြောင့် ပျက်စီးယိုယွင်းသွားသော စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်မွန်းမံပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပညာရေးသင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ရေးတွက် ရံပုံငွေစင်တင်တေးဂီတပွဲ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပွဲစီစဉ်သူ Wave Myanmar အဖွဲ
.မှ ကိုစောဟောရှေးက ပြောကြားသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ (၁၉) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် ဒဂုံမြို့နယ်၊ မြို့မကျောင်းလမ်းရှိ အမျိုးသားကဇတ်ရုံတွင် ရံပုံငွေ စင်တင်တေးဂီတ တရပ်အား ရခိုင်အမျိုးသားကွန်ရက်၊ WAVE Myanmar၊r နှင့် ဖွံဖြိုးရေး မဏ္ဍိုင်အဖွဲ့တို့မှ ဦးဆောင်လျှက် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
" ပညာရေးကို ဦးတည်တဲ့ ပွဲပါ။ ၀င်ကြေး ၁သောင်း၂ထောင်လောက် ယာယီသတ်မှတ်ထားတယ် " ဟု ကရင်အမျိုးသားစောဟောရှေးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ရံပုံငွေတေးဂီတအစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ဇွန်လအတွင်ကဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်ဖျက်စီးမှုကြောင့် ပျက်စီးသွားသော စာသင်ကျောင်းများ ပြန်လည်မွန်းမံရန်နှင့်၊ ကျောင်းသူ/သားများအတွက် လတ်တလောလိုအပ်လျှက်ရှိသော သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများ အချိန်မှီထောက်ပံ့ နိုင်ရေးအတွက် ဤရန်ပုံငွေတေးဂီတအစီအစဉ်ကို ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 05:05
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ရခိုင်ပြည်နယ် စာသင်ကျောင်များ ပြုပြင်ရန် တေးဂီတပွဲကျင်းပမည် . All Rights Reserved